Tips tsoavaly Amin'ny Kids amin'ny Lamasinina | Save A Train
Home > Travel Europe > Tips tsoavaly Amin'ny Kids amin'ny Lamasinina
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 29/12/2019)
Ho an'ny fianakaviana amin'ny ankizy, Moto miaraka amin'ny ankizy eo amin'ny fiaran-dalamby na dia mety ho mahafinaritra sy takatry ny fomba mba handeha. Izany koa angamba ny tena aina sy saina kely indrindra ianao, rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy. Fantatsika mandeha amin'ny ankizy dia sarotra na inona na inona ny fomba fitaterana, koa raha ianao Moto miaraka amin'ny ankizy eo amin'ny fiaran-dalamby. Ireto misy soso-kevitra!
Ny fianakaviana dia te-hahazo any amin'ny gara tany am-boalohany mba haka tapakila ka hahita tsara seza miaraka amin'ny fiaran-dalamby. Raha mbola tsy voatokana toerana, toerana dia azo jerena ao amin'ny voalohany tonga, first served basis, toy izany no tsy mba niraikitra tao amin'ny toerana izay ianao dia ho masina.
Eritrereto ny torimaso rehefa Moto miaraka amin'ny ankizy eo amin'ny fiaran-dalamby.
Moto miaraka amin'ny ankizy eo amin'ny lamasinina lavitra mifanojo amin'ny zanakao torimaso kely, fotoana, ka ho azo antoka ianao vonona. Mitondra fampiononana zavatra toy ny ondana na ny toerana tena blankie.
Ny ampahany manan-danja indrindra ny drafitra ho fiaran-dalamby nankany (indrindra fa raha ny ela) Tokony ho ahoana ianao handeha ny hitandrina ny ankizy voly.
Ny safidy mazava ho an'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny dia ny hividy kilalao vitsivitsy, na mitondra ny favoris avy any an-trano. Paint ny ankizivavy 'fantsika, mamaky boky, milalao Uno, mitondra loko ao amin'ny boky, ary mihaino ny audiobooks.
hafa lehibe tendron'ny for Riding with kids on a train is to download sarimihetsika eo amin'ny fitaovana, rehefa ao an-trano ianao, ary afaka mampiasa WIFI.
Misy no car seat requirements or fasten seat belt signs, ankizy toy izany dia afaka ny hifindra momba ny fiaran-dalamby araka izay hitanao fa mety! Fikarohana fiaran-dalamby miaraka amin'ny ankizy lehibe mba hitandrina azy ireo fomba no zava.
Tsy misy na inona na inona ratsy kokoa noho ny hoe ao amin'ny dia lavitra sy ho azon-tsampona Na izany na tsy lalana ny akanjo. Dress for fampiononana! Tsy fahazoan-dalana breathable, stretchy akanjo sy ny kiraro mampahazo aina mba hankafy ny traikefa eo amin'ny fiaran-dalamby. Za-draharaha mpitaingina fahazoan-dalana mitondra madinika vitsivitsy koa ny fiononana avy any an-trano, toy ny bodofotsy na mitora sy ny ondana.
Izay rehetra no sisa atao dia mipetraka indray, haka aina sy mankafy ny Riding miaraka amin'ny ankizy eo amin'ny fiaran-dalamby traikefa. Satria tsy misy mahazo ny antsasaky ny mahafinaritra!
Aoka isika hahafantatra amin'ny alalan'ny nibitsika antsika amin'ny @SaveATrain! , Azonao atao ny mahita ny hafa fantsona ara-tsosialy eo amin'ny fanambanin'ny Saveatrain
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Friding-with-kids-on-a-train%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
europeantravel ankizy longtrainjourneys trainmovies fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby nankany Travel Travelingtips Travelingwithkids Travelingwithkidstips traveltips
4 Tetikady handray soa faran'izay betsaka avy amin'ny Train Journey